pad ပါလိုအပ်ချက်များအတွက်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ - Shenzhen WMD Circuits, Ltd
အချိန်: 2012-05-18 hits:
အဆိုပါ 6118 နိုင်ငံတကာ Electrotechnical ကော်မရှင် IEC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Eletrotechnical ကော်မရှင်စံဂဟေဆက်လွှာသို့မဟုတ် pad ပါဖုအခြေအနေများများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပစ်မှတ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြု. ဤသည်အသစ်သောနိုင်ငံတကာအဆင့်မီ pad ပါပုံစံမျိုးစုံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးဘို့နှစ်ခုအခြေခံနည်းလမ်းများကိုအတည်ပြု:
1). စက်မှုဇုန်အစိတ်အပိုင်းသတ်မှတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတိကျမှုသတင်းအချက်အလက်များ, PCB မိတ္တူဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အစိတ်အပိုင်းနေရာချထားတိကျမှန်ကန်မှုကိုစွမ်းရည်. ဤရွေ့ကား pad ပါပုံစံမျိုးစုံတိကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းမှကန့်သတ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် pad ပါ၏ပုံသဏ္ဍာန်သတ်မှတ်ဖေါ်ပြတဲ့အရေအတွက်ရှိသည်.
2). တချို့ကညီမျှခြင်းတစ်ဦးထက်ပိုအားကောင်းတဲ့ဂဟေဆက်ပူးတွဲအောင်မြင်ရန်ပေးထားသောသတင်းအချက်အလက်ကိုပြောင်းလဲသုံးနိုငျ, သောတိကျမှန်ကန်မှုအတွက် pad ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်အဆုံးအဖြတ်သည့်အခါထက် device ကို mounting သို့မဟုတ် mounting အဘို့အယူဆသည်အဘယ်မှာရှိအထူးကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသည်. ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်.
ဤသည်စံအများဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်, အလယ်အလတ်, အမျိုးမျိုးသော pin ကိုသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းဆိပ်ကမ်း mount ဖို့အသုံးပြု pads အဘို့နှင့်နိမ့်ဆုံးပစ္စည်းအခြေအနေများ. မဟုတ်ရင်ညွှန်ပြမဟုတ်လျှင်, ဒီစံအမှတ်သုံးခုစလုံး “တပ်မက်လိုချင်သောအပစ်မှတ်” အဆင့်အဖြစ် 1, level2သို့မဟုတ်အဆင့် 3.
level 1: မက်စ် - အနိမ့်သိပ်သည်းဆထုတ်ကုန် application များအတွက်, အဆိုပါ "အများဆုံး" pad ပါအခွအေနမောက်သို့မဟုတ်စီးဆင်းမှုဂဟေ leadless chip ကိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့် Taskbar မှာအရင်ကမရှိသေးတဲ့တောင်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်. အဆိုပါဂျီသြမေတြီကဤအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ configured, အဖြစ်အူ "T က" shaped ခဲအစိတ်အပိုင်းများ, လက်ဂဟေနှင့် reflow ဂဟေများအတွက်ပိုမိုကျယ်ပြန်ဖြစ်စဉ်ကိုပြတင်းပေါက်ထောက်ပံ့.
level 2: Medium - အလတ်စားအစိတ်အပိုင်းသိပ်သည်�အလယ်အလတ်��လတ်စားနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းများဒီစဉ်းစားနိုင်ပါတယ် "medium" pad ပါဂျီသြမေတြီ. အဆိုပါ IPC-SM-782 စံ pad ပါဂျီသြမေတြီနှင့်တူအများကြီး, အားလုံးအစိတ်အပိုင်းအမျိုးအစားများများအတွက် configured တစ်ဦးအလတ်စား pad ပါပု reflow ဂဟေလုပ်ငန်းစဉ်သည်တစ်ကြံ့ခိုင်ဂဟေအခွအေနေပေးသွားမှာပါနှင့် leadless နှင့်ပျံဖြစ်သင့်. လှိုင်းသို့မဟုတ်စီးဆင်းမှုဂဟေသင့်လျော်သောအခြေအနေများထောက်ပံ့.
level 3: Minimal - မြင့်မားတဲ့အစိတ်အပိုင်းသိပ်သည်းဆကုန်ပစ�အနည်းဆုံး�်းများပုံမှန်အားအကောင့်ထဲသို့ယူနိုငျသောခရီးဆောင်ထုတ်ကုန် applications များဖြစ်ကြသည် "minimum" မြေယာဂျီသြမေတြီ. နိမ့်ဆုံး pad ပါဂျီသြမေတြီ၏ရွေးချယ်မှုအားလုံးထုတ်ကုန်များအတွက်သင့်လျော်သောမဖြစ်စေခြင်းငှါ. အသေးဆုံး pad ပါပုံသဏ္ဍာန်အသုံးမပြုမီ, ဒီစားပွဲမှာပြထားတဲ့အခြေအနေများအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ကုန် \_ 's သတ်နှင့်စမ်းသပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ကိုသုံးပါ.
အဆိုပါ pad ပါဂျီသြမေတြီ IPC-SM-782 အတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် IEC အတွက် configured 61188 အစိတ်အပိုင်းသည်းခံစိတ်နဲ့ process ကို variable တွေကိုလိုက်လျောညီထွေသင့်တယ်. အဆိုပါ IPC စံအတွက် pads ပြီးသားအသုံးပြုသူ \_ 's စည်းဝေးပွဲကို applications များအများစုများအတွက်ကြံ့ခိုင် interface ကိုပေးနေချိန်မှာ, အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်ခရီးဆောင်အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့်အခြားထူးခြားသောသိပ်သည်းဆမြင့်အဘို့အနိမ့်ဆုံး pad ပါဂျီသြမေတြီဘို့လိုအပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြ. လြှောကျလှာ.
နိုင်ငံတကာ Pad နျ Standard (IEC61188) ပိုမိုမြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသိပ်သည်းဆ application များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်နိုင်သည်နှင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများအတွက် pad ပါဂျီသြမေတြီအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့. ဤအချက်အလက်များ၏ရည်ရွယ်ချက်သင့်လျော်သောအရွယ်အစားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ပုံဖော်နှင့်မျက်နှာပြင်၏သည်းခံစိတ်လျော်သောဂဟေဆက်လွှာ၏လုံလောက်သောဒေသများသေချာစေရန် pads mount နှင့်စစ်ဆေးရေးခွင့်ပြု, ဤအဂဟေဆက်အဆစ်၏စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် rework.
ပြီးခဲ့တဲ့လက ၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်းအီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏စစ်ဆင်ရေး 2018
နောက်တစ်ခုISO ကို 14001: 2015 စံနှုန်းသစ်ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိ